Global Voices teny Malagasy » Nahoana i Pakistan no miezaka manelanelana amin’ny fifampiresahana fandriampahalemana eo amin’i Iran sy i Arabia Saodita? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 07 Novambra 2019 7:42 GMT 1	 · Mpanoratra Rabiya Jaffery Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sokajy: Azia Atsimo, Iràna, Pakistana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fitantanam-pitondrana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Toekarena sy Fandraharahàna, Zon'olombelona
Nihaona tamin'ny Mpanjaka Salman sy ny Printsy Mohammad Bin Salman  avy ao Arabia Saodita tamin'ny Oktobra 2019 ny praiminisitra Pakistaney Imran  Khan taorian'ny roa andro nandehanana tany Iran mba hiresaka momba ny olana ara-paritra. Na eo aza ireo olana anatiny marobe tsy voavaha, voatsikera mafy ao an-tanindrazana sy ny any ivelany ny andraikitr'i Pakistan amin'ny fifampiraharahana amin'ny resaka fandriampahalemana Iran-Saodita.
Nitombo vao haingana ny fifanolanana teo amin'i Arabia Saodita sy Iran – samy fahavalo henjana ara-paritra – taorian'ny fanafihana ny tobin-tsolika Saodiana tamin'ny volana lasa teo, izay nahitana fiantraikany ratsy tamin'ny famokarana solika ao amin'ny fanjakana ary nahatonga ny fikaran'ny vidin'ny solika manerantany. Nilaza fa tompon'andraikitra tamin'ny fanafihana ireo mpikomy Houthi  ao Yemen, izay miady amin'ny vondrona Yemenita isan-karazany tohanan'ny fiarahana tarihan'i Arabia Saodita nanomboka tamin'ny taona 2015 ary voalaza  fa tohanan'i Iran sy i Korea Avaratra kosa.
Nolavin'i Iran ny fandraisany anjara ary nampitandrina  ny mety hisian'ny “ady feno” izy raha misy ny fanafihana ny faritaniny. Miezaka mafy mamaha ny fifandonana eo amin'ireo mpifahavalo goavana ankehitriny i Pakistan, izay nitàna fifamatorana akaiky tamin'i Arabia Saodita (ary efa niala tamin'i Iran nandritra ny taona maro), na dia mijanona amin'ny fomba ofisialy tsy mitanila amin'ity fifandirana ara-paritra ity aza.
“Manome lanja goavana ny fifandraisana amin'i Iran i Pakistan”, hoy  i Khan, araka ny fanambarana an-gazety. “Vonona ny handray ny andraikiny amin'ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana ao amin'ny faritra i Pakistan.”
Nifototra tamin'ny tsy fifampitokisana noho ny antony maro ny fifandonana eo amin'i Iran sy Pakistan tao anatin'ny taona vitsy lasa. Nifampiampanga ny firenena roa tonta fa manohana  ireo hetsika fisintahana ao amin'ny firenena ao amin'ny faritanin'i Baluchistan, izay manasaraka ny sisintanin'ny roa tonta.
Nahatonga an'i Iran hisalasala an'i Pakistan ihany koa i Raheel Sharif , lehiben'ny tafika teo aloha tao Pakistan mitarika ny firaisan'ny miaramila ankehitriny tarihan'ny Saodiana mba hanohitra ny Shiita Houthis any Yemen, ka nampahasarotra kokoa ny asan'i Khan.
Na izany aza, dia nankasitraka  ny fihetsik'i Pakistan i Iran, na dia efa mahafantatra ny fiarahamiasan'i Pakistan amin'i Arabia Saodita aza. Nilaza i Akhtar fa te-hitazona ny fifandraisana “ho tsy miandany , na dia ny kely indrindra aza” amin'ireo firenena manodidina azy i Iran, na eo aza ny ahiahiny.
Nitsidika an'i Pakistan tamin'ny volana Martsa ihany koa ny filoha Iraniana Hassan Rouhani  mba hiezaka handresy lahatra ny governemantany hijanona tsy hitanila amin'ny ady.
Ny filoha Rouhani nandritra ny fihaonana tamin'ny filohan'i Pakistan, Aref Alavi tamin'ny fihaonambe NAM tany Baku: Manana fahafahana tsara hanitatra ny fiarahamiasa i #Iran  & Pakistan. Manitatra ny fiarahamiasa amin'ireo firenena ao amin'ny faritra i Iran ary nametraka an'i #Pakistan  ho laharam-pahamehana amin'ny politikany izy.
Tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety niarahana taorian'ny fifampiresahana teo amin'ny firenena roa tonta tamin'ny Oktobra 2019, nilaza  i Rouhani fa tsara ny fihetsika ho an'ny fandriampahalemana.
Nisioka ny Mpitarika Faratampony Ayatollah Seyed, Ali Khamenei  ao Iran hoe:
Mandray an'i #Pakistan  ho rahalahy mpifanolo-bodirindrina i Iran. Amin'ity hirika tsy mbola nisy toy izany ity, tokony ho tsara kokoa noho ny ankehitriny ny fifandraisana eo amin'ny firenena roa tonta. Tokony hamafisina ny fiarovana eny amin'ny sisintany, ary tokony vitaina ireo tetikasa naato toy ny fantsona mitondra etona.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/11/07/144531/
 Nihaona : https://gulfnews.com/world/asia/pakistan/saudi-arabias-king-salman-holds-talks-with-pakistans-imran-khan-1.1571172577072
 Mohammad Bin Salman: https://en.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Bin_Salman
 fanafihana : https://www.aljazeera.com/news/2019/09/saudi-oil-attacks-latest-updates-190916102800973.html
 lasa mpiantsehatra lehibe sy : https://www.independent.co.uk/voices/imran-khan-naya-pakistan-india-kashmir-us-iran-new-messages-a9121126.html
 Nifototra : https://dailytimes.com.pk/405190/the-evolving-relationship-between-pakistan-and-iran/
 Nifampiampanga : https://thediplomat.com/2018/10/trouble-at-the-pakistan-iran-border/
 Raheel Sharif: https://en.wikipedia.org/wiki/Raheel_Sharif
 mitarika : https://www.nytimes.com/2017/04/02/world/asia/pakistan-general-saudi-alliance-raheel-sharif.html
 Hassan Rouhani: https://en.wikipedia.org/wiki/Hassan_Rouhani
 Ali Khamenei: https://en.wikipedia.org/wiki/Ayatollah_Seyed_Ali_Khamenei
 October 13,: https://twitter.com/khamenei_ir/status/1183417598307909634?ref_src=twsrc%5Etfw